जीवनको वासना- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २, २०७४ अनन्त वाग्ले
काठमाडौं — सम्पन्न देशहरूमा दूध, ल्याक्टोजिनजस्ता बेबी फुडदेखि बालबालिकाका अन्य सरसामान किन्दा पनि कथाका पुस्तक उपहार दिने प्रचलन छ । जन्मदिन, चाडपर्व या विशेष भेटघाटमा दिइने उपहारमा पनि पुस्तक रोजा विषयमा पर्छ ।
हामी पहिरन, जीवनशैली र खानपानमा अन्धाधुन्ध विदेशी नक्कल गरिरहेका र्छाँै भने यस्ता कुराचाहिँ किन नक्कल नगर्ने ? अन्तराष्ट्रिय बाल दिवसका सन्दर्भमा एक आलेख:
दृश्य १ : साँझको समय । साना नानी टेलिभिजनमा कार्टुन हेर्दै छन् । पार्टीबाट फर्केर मम्मी भाइबरमा मस्किरहनुभएको छ । बाबा मेसेन्जरमा मस्त । बज्यै बेला–बेला फत्फताउनुहुन्छ । बाजे एकसुरले टोलाइरहनुभएको छ ।
दृश्य २ : उही समय । अँगेनाको वरिपरि सबै जना आगो ताप्दै छन् । आटमा पिलपिल टुकी बलिरहेको छ । बज्यै सुनकेशरी मैयाँको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ । नानीहरू कौतूहलपूर्वक कथा सुन्दै छन् । बीच–बीचमा नानीहरू विविध जिज्ञासा राख्छन् र बाजेबज्यै खुसी हुँदै जिज्ञासा शान्त गर्छन् ।
औसत नेपाली परिवारका आधुनिक र परम्परागत दृश्य हुन् यी । पहिलो दृश्य सहरिया परिवारको हो । गाउँमा भए बाबु अरबमा हुन सक्छ । दोस्रो केही दशकअगाडिको । आधुनिकीकरण र विज्ञान प्रविधिको विकासले जीवनशैली सहज त बनेको छ । यद्यपि त्यसले थुप्रै जटिलता निम्त्याएको छ । साना नानीको बालापन पनि जटिलतामा जेलिएको छ । घरमा उनीहरू न्यु मिडिया र ग्याजेटमा रुमल्लिछन् । स्कुलमा किताब रटाइन्छ । रट्ने विद्याले तिनको रच्ने क्षमताको विनाश भइरहेछ । धूलो–माटोमा लडिबुडी गर्दै, आफैँ बनाएका भाँडाकुटी खेल्दै अनि स्वैरकल्पनाले भरिएका कथाहरू सुन्दै गर्दा उनीहरू जति कल्पनाशील हुन्थे, सिर्जनशील हुन्थे आज त्यसमा गिरावट आइरहेको छ । सहरमा बस्नेले गाउँ नबुझ्ने, सम्पन्नले विपन्नता बोध नगर्ने, देशको भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृति र आम जीवनशैलीसँग साक्षात्कार नगर्नाले विभेदका खाडल पनि गहिरिँदा छन् ।
यसको समाधानमा किताब एउटा उपाय हुन सक्छ । पठन संस्कृतिलाई मानिसमा करुणा र विवेक भर्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ, जसले बालबालिकालाई सिर्जनशील बनाउँछ । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले पनि बालककालमा कान्छी ज्यामैले सुनाएका दन्त्यकथा र बूढापाकाबाट सुनेका श्लोकले आफ्नो सिर्जनशीलता मुखरित भएको बताएका छन् । अनुसन्धानहरूबाट के पत्ता लागेको छ भने बालबालिकालाई पोषण र सन्तुलित भोजनले शारीरिक विकासमा सघाउ पुर्‍याएजस्तै असल पुस्तकले उसको मानसिक विकासमा त्यत्तिकै महत्त्व राख्छ ।
हामी पहिरन, जीवनशैली र खानपानमा अन्धाधुन्ध विदेशी नक्कल गरिरहेका र्छाँै भने यस्ता कुराचाहिँ किन नक्कल नगर्ने ?
साँच्चै मानिस र किताबको नाता युगौँ पुरानो छ । ईपू ३५ सय वर्षभन्दा अघिदेखि क्ले ट्याब्लेट अर्थात् माटाको खबटामा क्युनिफर्मका रूपमा सुरु भएको पुस्तक प्रकाशन अहिले हल्काफुल्का, विभिन्न कलेवरका वासनादार कागज र आकर्षक साइजमा आइपुग्दासम्म किताबको यात्रा अकल्पनीयझैँ लाग्छ ।
किताब साँच्चै मानिसको नि:स्वार्थ र असल साथी हो । के तपाईं एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ वा आफूलाई अस्वीकृत ठान्नुहुन्छ ? या बोर, वितृष्णा र चिडचिडाहटले ग्रस्त हुनुहुन्छ ? यस्तो अवस्थामा प्रिय साथी, सल्लाहकार वा मनोविमर्शदाताको रूपमा किताबले काम गर्न सक्छ । किताब यस्तो विश्वासपात्र हुन्छ, जसले कहिल्यै तपाईंको गोपनीयता भंग गर्दैन । कहिल्यै ब्ल्याक मेल गर्दैन । कुनै माग या आशा अपेक्षा पनि गर्दैन ।
हामी जस्तासुकै दूरदराजमा पुगौँ, भूगोल, मानिस र जीवनशैली अपरिचित हुन् । किताबले सहजै समय बिताउन सघाउँछ । सम्बन्धित विषयकै किताब भए त त्यो नयाँ परिवेशमा घुलमिल हुन पनि
सिकाउँछ । किताब हाम्रो यात्राको अभिन्न साथी हो, जसले हामीलाई कहिल्यै एक्लो हुन दिँदैन । यो एउटा अनमोल गाडधन पनि हो, जसभित्र हामीलाई मन पर्ने अकल्पनीय खजानाहरू हुन्छन् । सायद किताब नहुँदो हो त संसारमा डिप्रेसन र आत्महत्याको अवस्था सम्हालिनसक्नुको हुन्थ्यो । किताबले डिप्रेसन नियन्त्रणमा चिकित्सा विज्ञानले भन्दा कैयौँ गुना बढी काम गरेको हुनुपर्छ ।
किताबमा हुने आफ्नो रुचिको विषयको विस्तृत ज्ञान त छँदै छ, आख्यानका घटना, परिवेश र पात्रका संघर्षले बालबालिकालाई सधैँ जीवन र जगत्प्रति आशावादी बनाउँछन् । हामीकहाँ अझै पनि किताब या पढाइ भनेपछि विद्यालय/विश्वविद्यालयका कोर्स बुक मात्र सम्झने साँघुरो सोचाइ जीवितै छ । कोर्स बुकले जीवनका आंशिक कुरा मात्र समेटेको हुन्छ । अर्थात् कोर्सको पढाइ अधुरो र अपुरो हुन्छ । त्यसैले जोकोहीले पनि बाहिरी किताबमा विचरण गर्नैपर्छ । अझ हाम्रा सन्ततिलाई त जतिसक्दो चाँडो दुनियाँसँग परिचित गराउन कोर्सभन्दा बाहिर लैजानैपर्छ । नत्र उनीहरूभित्रको असीम उत्साह र अखण्ड प्रतिभा प्रस्फुटन हुनै नपाई मुर्झाउन पनि सक्छ ।
धेरै मानिस घर बनाउँछन् । भित्री सजावटमा पनि खुब ध्यान दिन्छन् । बैठक, भान्सा, सयन कक्ष सबै एक से एक हुन्छ । कतिपयले त बार पनि सजाएका हुन्छन् । ती सानदार घरमा जब एक र्‍याक पुस्तक पनि हुँदैन, ती सबै चमकधमक फिक्काफिक्का र निर्जीव लाग्छन् । बरु झुपडी नै होस्, जहाँ केही किताब छन्, त्यहाँ जीवनको वासना पाइन्छ । बालककाल पनि जीवनमा मगमगाउँदो वासना भर्ने समय हो र किताबले तिनमा त्यो सुवास भर्न सक्छ । अनि जसले आफूमा सुवास भरेको हुन्छ, उसैले समाजलाई सुवासित बनाउने खुबी राख्छ ।
हिजोआज पठन संस्कृति विकासमा विद्युतीय सञ्चार माध्यम एउटा चुनौतीका रूपमा उपस्थित छ । रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमा, कम्प्युटर, मोबाइलजस्ता माध्यमबाट ज्ञान र मनोरञ्जनका विभिन्न सामग्री प्राप्त हुनाले कतै किताबको प्रयोजन घट्दै गएको पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यद्यपि सूचना र सञ्चार प्रविधिमा जतिसुकै विकास भए पनि किताबको बेग्लै महत्त्व छ र यसको प्रभावकारिता घट्ने सम्भावना कमै छ । पुस्तकप्रेमी र असल पाठकहरू भन्छन्— किताबको स्वाद अरू कुनै माध्यमबाट पनि पाइँदैन । त्यसैले त अहिले पनि संसारमा हरेक दिन तीन हजार टाइटलका नयाँ नयाँ पुस्तक दैनिक सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।
सानो उमेरमा बालबालिकाले जति धेरै किताब पढे, उनीहरूको भाषा पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ । जसको
भाषा राम्रो छ, त्यसले अध्ययन, रोजगारलगायत हरेक क्षेत्रमा सफलता पाउँछ । भाषामा राम्रो भएका बालबालिकाको अरू सबै विषयमा पनि राम्रो नतिजा पाइन्छ । यी तथ्य अनुसन्धान तथा दृष्टान्तहरूबाट प्रमाणित छन् ।
हाम्रोजस्तो भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा भने पुस्तक संस्कृति विकासमा बेग्लैखाले समस्या पनि छन् । एकातिर अविकसित र दुर्गमका बालबालिकाको पुस्तकमा पहँुच नै छैन । त्यहाँका विद्यालयहरूमा पुस्तकालय छैनन् र अभिभावक तथा शिक्षकमा समेत पुस्तकको महत्त्व बोध छैन । अर्कातिर सहरिया समुदायमा न्यु मिडिया र ग्याजेटको हावीले बालबालिका त्यतै अल्मलिएका छन् । कार्टुन र भिडियो गेममा उनीहरू खुबै लट्ठिन्छन् भने खुला च्यानलहरूका कारण जुनसुकै कार्यक्रम पनि उनीहरू हेरिदिन्छन् । कतिपय हिंसात्मक र आपराधिक खालका दृश्यले उनीहरूको मानसिक विकासमै नकारात्मक प्रभावसमेत बढ्दै गएको छ । संसारका विकसित देशहरूमै पनि यो एउटा समस्या बनिरहेको छ । कुनै किशोरले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर कैयौँको ज्यान लिएका जस्ता समाचार बरोबर आउन थालेका छन् ।
नानीदेखि लागेको बानी नै दिगो र टिकाउ हुन्छ । त्यसैले हाम्रा साना नानीहरूमा पुस्तक पढ्ने बानी बसाल्नका लागि प्रारम्भिक कक्षामै पढ्ने सीप र पढ्ने बानी बसाल्नु जरुरी छ । कक्षा ३ सम्ममा पढ्ने सीप तथा पढ्ने बानीको विकास भइसक्नुपर्छ भन्ने आधुनिक शिक्षाको मान्यता छ । पढ्ने क्षमता जति बढ्यो, उतिउति पढ्नमा रुचि पनि बढ्दै जान्छ । आफूलाई मन परेको किताब आफैँ खोजेर, किनेर, मागेर या टिपेर पढ्ने रहर या उत्साह, जाँगर पैदा हुनु नै पढ्ने बानी हो । यसतर्फ उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । यसरी उत्प्रेरित भइसकेका र किताबलाई आफ्नो जीवनशैली बनाइसकेकालाई हामी स्वतन्त्र पाठक भन्छौँ । साक्षरता वृद्धिसँगै हामीले स्वतन्त्र पाठकको सङ्ख्या पनि बढाउनु जरुरी छ । वास्तवमा स्वतन्त्र पाठक नै आफ्ना समस्या हल गर्न र बुद्धि, विवेकसाथ आफ्नो जीवन सरस र सहज बनाउन सक्षम हुन्छन् ।
मुलुकमा जति बढी नागरिकमा पढ्ने बानी हुन्छ, त्यति नै बढी जिम्मेवार र विवेकशील नागरिक तयार हुन्छन् । यसले गर्दा नागरिकको जीवन सहज, समुन्नत हुने त छँदै छ राष्ट्रकै समग्र विकासमा यसले ठूलो भूमिका निर्वाह हुन सक्छ । त्यसैले पनि हाम्रोजस्ता विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा पठन संस्कृतिको अझ महत्त्व छ ।
विख्यात लेखक रस्किन बोन्ड भन्छन्, ‘सक्दो धेरै साथीहरू बनाऊ र सकेसम्म धेरै पुस्तक पढ । यसबाट नै तिम्रो जीवनमा शान्ति र आनन्द सम्भव छ ।’
साँच्चै भन्ने हो भने असली पढाइका लागि चार पर्खालले बन्द कक्षाकोठाको आवश्यक छैन । पढाइ भनेको सूचना र ज्ञान हो । सूचना भएन भने हामी बदलिँदो समाजमा लाटो बन्छौँ । हरेक विषयमा अपडेट भएनौँ भने हामी आउट डेटेड हुन्छौँ । पढाइ भएन भने उत्साह र उमङ्ग हुँदैन । उत्साह र उमङ्ग भएन भने जीवन जिउन कठिन हुन्छ । जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरणका लागि पनि पुस्तक अपरिहार्य छ । पढाइ अति आवश्यक छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ नै छ : ‘गुड रिडर इज द गुड लिडर’ ।
संसारमा नित्य नवीन आविष्कार र विकास भइरहेका हुन्छन् । प्रविधिमा आएको फड्कोले संसारै एउटा गाउँ (ग्लोबल भिलेज) बनेको छ । हामी जहाँ जुनसुकै बेला संसारको कुनै पनि कुनाको मानिससँग अनुहार हेरीहेरी संवाद गर्न सक्छौँ । हत्केलाको सानो स्क्रिनमा जुनसुकै विषय भेट्न सकिन्छ । यो अत्याधुनिक समयमा आफूलाई अपडेट राख्न र आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा विकास भइरहेको नयाँ प्रविधि र प्रवृत्तिसँग सहज भइरहनका लागि पनि पुस्तक पठन आवश्यक छ । पढ्नुका फाइदा अनेक छन् । हरेकले यो फाइदा लिनका लागि आफूभित्र निष्क्रिय र मौन बसेको पाठकलाई ब्युँझाउनु र जगाउनु छ । अनि बालबालिकामा असल किताबमार्फत समयमै त्यो ऊर्जाशील पाठकलाई हुर्काउनु जरुरी छ ।
पुस्तक तथा पठन संस्कृतिबाट नै हाम्रो बदलिँदो समाज शान्त र विवेकी बन्नेछ । सभ्य र ज्ञानवान हुनेछ । शक्ति र समृद्धि पनि यसैमा निहित छ । अनि हाम्रा प्रिय कवि भूपी शेरचनले यी हरफ लेखिरहनुपर्ने छैन :
‘हामी वीर छौँ
र त हामी वीर छौँ.. .. ।’
प्रकाशित : मंसिर २, २०७४ ०९:१३
श्रावण १६, २०७४ अनन्त वाग्ले
वास्तवमा आफ्नै राष्ट्रभाषामा सर्वाधिक कमजोर नतिजा देखिनु एक किसिमको राष्ट्रिय लज्जाकै विषय हो। अनुसन्धानहरूबाट प्रमाणित भएको छ कि भाषामा अब्बल विद्यार्थीले अरू सबै विषयमा राम्रो गर्न सक्छन्। तर यस नतिजाले भने अरू विषयमा राम्रो विद्यार्थी नेपाली भाषामा कमजोर रहेको उल्टो सन्देश दिएको छ। त्यसो त यसको मुख्य कारक हाम्रा खासगरी निजी विद्यालय तथा अभिभावकको अंग्रेजी मोह नै हो। विश्व बजारमा बिक्ने प्रतिस्पर्धाका कारण रहर या बाध्यताले अंग्रेजी मोह जति नै बढे पनि नेपालीमा पनि हाम्रा नयाँ पुस्ता अब्बल हुनु जरुरी छ। यो एउटा भाषाको मात्र नभएर राष्ट्रको प्रतिष्ठा जोडिएको विषय पनि हो। यसर्थ नेपाली सुधार्न सकिने केही बुँदा यसप्रकार छन् :
पढाइ केन्द्रित शिक्षण : सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ भाषाका मुख्य सीप भए पनि हाम्रो परीक्षा प्रणाली अद्यापि लेखाइमा आधारित छ। लेखाइ भाषिक सीपमा सबैभन्दा उच्चतम हो। लेखाइ राम्रो हुन पढाइ राम्रो चाहिन्छ। सानो कक्षामा पढाइमा हुने कमजोरीले ठूला कक्षासम्म पुग्दा पनि हाम्रा बालबालिकाको लेखाइसमेत कमजोर रहन्छ। त्यसैले साना कक्षामा खासगरी तीन कक्षाभित्रै बालबालिकालाई पढ्ने सीप तथा पढ्ने बानी हस्तान्तरण गर्न सकियो भने उनीहरूमा चाँडै स्वतन्त्र पाठक बन्ने सक्षमता विकास हुन्छ। स्वतन्त्र पाठक हुन उनीहरूमा कुनै पनि पाठ शुद्ध, गति र अभिव्यक्तिसाथ पढ्ने क्षमता चाहिन्छ। यस्तो क्षमता विकास भयो भने नि:सन्देह बालबालिका आफूलाई मनपरेको पुस्तक, कथा या पाठ पढ्न आफैँ अघि सर्छन्। यसबाट पठन संस्कारका साथै तिनको लेखन सीप विकास हुन्छ। कुनै पनि शब्द वा वाक्य लेख्दा त्यसमा आउने प्रत्येक वर्ण या मात्रा पहिले दिमागमा आउँछ।
भाषा शिक्षणमा पहिले वर्णमा आधारित शैक्षणिक प्रणाली प्रचलनमा थियो। यसले अक्षर चिनारीलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो। अक्षर अर्थात् वर्ण हुँदै शब्द, वाक्य, अनुच्छेद र पाठ सिकाइ क्रमश: गराइन्थ्यो। अलिक पछि बालबालिकाले पहिले सन्देश या सिङ्गो पाठ बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित सम्पूर्ण भाषा शिक्षण विधि शिक्षाशास्त्रीहरूले स्थापित गरे। अक्षर, शब्द चिन्ने कुरा आफसेआफ हुँदै जान्छ भन्ने यसको अभिप्राय थियो। फेरि केही दशकपछि वर्णमा आधारित र सम्पूर्ण भाषामा आधारित दुवै प्रणालीका राम्रा पक्ष समेटेर सन्तुलित प्रणाली प्रयोगमा ल्याइयो। पछिल्लो समय सन्तुलित प्रणालीको पनि उत्तम विकल्पका रूपमा पाँच तत्त्वमा आधारित शैक्षणिक प्रणाली आएको छ। सन् २००० मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा गठित नेसनल रिडिङ प्यानलले गरेको एक लाखभन्दा बढी अनुसन्धानको समीक्षाका आधारमा तय गरिएको पाँच तत्त्वमा आधारित पढाइ आज संसारभर साना कक्षाको पढाइमा प्रचलित छ। हाम्रोमा हाल १६ जिल्लामा परीक्षणका रूपमा अपनाइएको प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम पनि यसैमा आधारित छ। प्यानलले निर्दिष्ट गरेका पढाइका पाँच तत्त्वमा ध्वनि सचेतीकरण, वर्ण चिनारी, शब्दभण्डार, पठन प्रवाह र बोध छन्। यसमा लेखाइसमेत थपेर प्रयोगमा ल्याइएको प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम देश्वयापी हुनसकेमा नेपाली सुध्रन सक्छ।
विद्यालयमा बालसाहित्य : कक्षामा पढाइ हुने हाम्रा अधिकांश पाठ्यपुस्तक बालबालिकाका लागि रुचिकर छैनन्। रुचि नभए पनि पाठ्यक्रममा आधारित हुनाले बालबालिकाले त्यो पढ्नैपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त मनोरञ्जनमूलक बालसाहित्यका पुस्तक पढ्ने अवसर दिनसकेमा बालबालिकामा पढाइप्रति अभिरुचि जगाउन सकिन्छ। सानामा पढाइमा जागेको अभिरुचिले उनीहरू स्वतन्त्र पाठक त बन्छन् नै, दीर्घकालसम्म रहने पठन संस्कारले तिनको लेखाइ पनि समृद्ध बन्छ। यसका लागि कक्षामा किताब कुना, विद्यालयमा पुस्तकालय, गाउँ–टोलमा बाल पुस्तकालय स्थापना गर्नु जरुरी छ।
मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा र भाषिक एकता : नेपाल धेरै भाषाभाषीको देश हो। विभिन्न समुदायका भाषाभाषीले आफूहरूलाई नेपाली खस भाषाले जबर्जस्ती डोमिनेट गरेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। अर्कातिर नेपाली भाषाका हर्ताकर्ता ठान्नेहरूमा मातृभाषामा शिक्षा दिँदा मातृभाषाबाट उनीहरू सिधै अंग्रेजीमा प्रवेश गर्ने र नेपाली भाषा बिस्तारै उपयोगहीन हुँदै जाने दाबी गर्छन्। वास्तवमा यी दुवै चिन्तन पूर्ण सत्य होइनन्। खासमा साना बालबालिकाको शिक्षा मातृभाषामा दिनु नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। प्राथमिक कक्षा मातृभाषामा पढेका बालबालिकाले माथिल्ला कक्षामा नेपाली झन् चाँडो सिक्न सक्छन्। नेपालीप्रति तिनको श्रद्धा र सम्मान बढ्नेछ।
वर्णविन्यासमा एकरूपता : नेपालीका कथित बुज्रुकहरूले युनिकोड सजिलो बनाउने, समयअनुसार परिवर्तन या एकरूपताका नाममा केही वर्षयता विद्यार्थी, पाठक तथा भाषा प्रयोगकर्तालाई अलमलमा पारेका छन्। नयाँ र पुरानो वर्णविन्यासको मारमा सबैभन्दा बढी प्रताडित विद्यार्थीले हुनुपर्‍यो। सयौँ वर्षदेखि चल्तीको वर्णविन्यासलाई मन्त्रीको तोकादेश गराई बिगार्ने काम भयोजसलाई त्रिवि र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सच्याउँदै सनातन चलनचल्तीकै वर्णविन्यास अपनाउने निर्णय गरिसकेका छन्। यद्यपि छापिएका धेरै पुस्तक बाँकी रहेको भन्दै यस वर्ष सच्याउन नसकिने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ। विगतका त्रुटि सच्याउँदै अब विद्यार्थीलाई वर्णविन्यासमा अलमलमा पार्नु हुन्न।